China DL-Malic Acid ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya Bohua
CAS Mba: 97-67-6
Aha ndị ọzọ: Egwu
EINECS Mba: 202-601-5
FEMA Mba: Egwu
Ụdị: Ndị na -achịkwa acid
Nọmba nlereanya: 20200508
Product aha: Egwu
Ụdị: Ụdị ntụ ntụ
Nchekwa: Nchekwa Mịrị Akọrọ
Ịlele: Enwere ike ịnweta ya
Malic acid bụ ihe na -emepụta ihe nke nwere usoro molekul C4H6O5. Ọ na -enye aka na ụtọ mkpụrụ osisi na -atọ ụtọ, a na -ejikwa ya dị ka ihe mgbakwunye nri. Malic acid nwere ụdị stereoisomeric abụọ (L- na D-enantiomers), n'agbanyeghị na ọ bụ naanị L-isomer dị n'okike.
Malic Acid nwere hygroscopic siri ike, soluble na mmiri na ethanol. Enwere acidity dị ụtọ pụrụ iche.
Nri uto nke acidic dị nso na apụl sitere n'okike, ma e jiri ya tụnyere citric acid, yana acidity, ụtọ na nro, ogologo oge obibi, wdg, ejirila ya mee ihe n'ọtụtụ ihe ọ drinksụ, ụ, nri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
2.Malic Acid, acid citric acid intermediates organism, nwere ike isonye na usoro ịgba ụka nke microorganism nwere ike iji dị ka isi mmalite carbon maka uto microbial, yabụ enwere ike iji ya mee ihe n'ụlọnga nri nri. Enwere ike ime yist dịka ọmụmaatụ onye na-akwalite uto nwekwara ike tinye ya na mmiri ara ehi.
3.Malic Acid nwere ike mepụta mmetụta pectin gel, enwere ike iji ya mee achịcha mkpụrụ osisi, jam na jelii gel steeti purees, wdg.
Ọdịdị Ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọcha, ntụ ntụ kristal ma ọ bụ granules nwere ụtọ acid siri ike
Nnwale (dị ka C4H6O5) 99.0%~ 100.5%
Aha Chemical DL-hydroxy butanedioic acid
Arsenic 2mg/n'arọ Max
Acid Fumaric Ọkpụkpụ 1.0%
Mmiri Maleic 0.05%Max
Okwu anaghị agbaze mmiri Ọkara 0.1%Max
Isi ọrụ na nzube Enwere ike iji DL-Malic acid mee ihe dị ka ihe na-egbu egbu n'ime ihe ọ coolụ coolụ dị mma (gụnyere ihe ọ lactụ lactụ lactobacillus, ihe ọ milkụ milkụ mmiri ara ehi, ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated, cola), nri jụrụ oyi (gụnyere sherbet na ice cream), nri ndị edoziri (gụnyere mmanya na Mayonezi). A na-eji ya dị ka onye na-echekwa ụcha na antiseptik ihe ọ juiceụ. A na -ejikwa ya dị ka emulsion stabilizer nke nkochi ime akwa. Enwere ike iji DL-Malic acid dị ka etiti ọgwụ, ịchọ mma, itucha, nhicha igwe, onye na-echekwa ihe, onye na-egbu azụ na ụlọ ọrụ akwa, ihe na-acha ọcha na-acha ọcha nke eriri polyester.
Buru ụzọ 2mg/n'arọ Max
Nchekwa Edebere ya nke ọma na ebe na-enwu enwu, kpọrọ nkụ ma dị jụụ.
Mbukota 25KG net na Kraft/akpa rọba nwere akpa PE, 17MT/20FCL (na pallet) ma ọ bụ 19MT/20FCL (na -enweghị pallet).
Nke gara aga: Citric Acid Monohydrate/Mmiri Acid Acid
Osote: Acid Fumaric
Dl -Acid nke mmiri
Mmiri ara ehi Malic